Donation to Sama Taung Youth Development Garden
CSR & Environment /
On 30 May 2020, Mee Lin Gyaing Electric Power Company donated 7,000,000 MMK (for 270 bags of rice) for over 1,000 orphans at the Sama Taung Youth Development Garden.
The monks at the Sama Taung Monastery and Mahar Charity Center have been providing for over 1,000 orphans full time for their nutrition, shelter, well-being and education. These orphans include 41 graduates,2captains-to-be, 40 university students, 200 high school students, 500 elementary and middle school students, and infants.
မီးလင်းဂျိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီမှ “စမတောင်မိဘမဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉ်” ရှိ မိဘမဲ့ကလေးတစ်ထောင် ကျော်အတွက် ဆန်အိတ် ၂၇၀ ဘိုး ၊ကျပ် ၇၀ သိန်း ကို မဟာပရဟိတဂေဟာ-စမတောင် (သာဝတ္ထိ/လယ်ဝေး) ဆရာတော်ကြီးထံ ၂၀၂၀ခုနှစ်မေလ၃၀ရက်နေ့ ၌ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ဘွဲ့ရ ၄၁ ဦး၊ဗိုလ်လောင်း၂ဦး၊ဆေးတက္ကသိုလ်/နည်းပညာတက္ကသိုလ်/ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်/အဝေးသင်/သူနာပြု/တိုင်းရင်းသားတက္ကသိုလ်များတွင်တက်ရောက်သင်ကြားဆဲကျောင်းသား ၄၀ ဦး နှင့် အထက်တန်းကျောင်းသား၂၀၀ ကျော်၊အလယ်တန်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းသား ၅၀၀ ကျော် နှင့် ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးများအပါအဝင်စုစုပေါင်း ဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော်ကို ဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်၍ သံဃာတော်များမှမေတ္တာတရားဖြင့်စားသောက်ရေး၊နေထိုင်ရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးကိစ္စအဝဝကိုအချိန်ပြည့်တာဝန်ယူပေးလျက်ရှိပါသည်။
Contributing oxygen to hospitals in need
Umbrella and Anekezar Blessing Ceremonies in Nay Pyi Taw
December 1, 2020 | Comments off
Moekya Kahtein Held for 14 Monasteries in Ayeyarwaddy Region
November 29, 2020 | Comments off
13th Moekya Kahtein Held for 42 Monasteries in Yangon
Mee Lin Gyaing Electric Power Company’s Donations in Nay Pyi Taw, Pyinmana, and Laeway